Iividiyo zokufunda i-AutoCAD, simahla !! -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Iividiyo zokufunda AutoCAD, mahala !!
Iividiyo zokufunda AutoCAD, mahala !!
Obu bubutyebi obuxabisekileyo bokufunda i-AutoCAD ngeevidiyo, ngendlela leyo ngoku isimahla, yonke into eyifunayo bubhaliso. Ngokuqinisekileyo iya kuba luncedo olukhulu kwabo bafuna ukufunda ukusebenzisa i-AutoCAD ukuqala ukubulela ku-LearnCADFast.com.
Ihlukaniswe ubuncinane kwiindawo ze-5, eyona yokuqala ejoliswe kwizinto eziza kuqala, ezimbini ezalandelayo ukwakhiwa kwedatha kunye nokugqibela ekwakhiweni kwemiboniselo eyenza ukudweba kwifomathi yefayili ukukhuphela:
A. IiTutorials zevidiyo ze-AutoCAD, imigaqo-siseko
1. Isingeniso kwi-AutoCAD
Eli candelo sisingeniso esiqhelekileyo kwi-AutoCAD, kwabo baqala ekuqaleni. Ibandakanya iinkcazo ezinje ngokuphathwa kwemenyu, uququzelelo, iibar zesixhobo kunye nezinye izihloko ezisisiseko.
2. Yakha umzobo omtsha
Eli candelo licacisa indlela yokwenza umzobo omtsha, useto lweyunithi kunye nendawo yokusebenza. Iiyunithi, ukuchaneka, kunye nee-engile ezinesihloko esahlukileyo ezichaziweyo zichaziwe kwifom yokudala.
Le vidiyo ichaza indlela i-AutoCAD ilawula ngayo iiyunithi ezilinganayo kunye neengangoma.
4. Ukulungelelanisa inkqubo kwi-AutoCAD
Apha sichaza indlela yokubeka iingongoma kwiindawo ezivela kuyo usebenzisa i-angle ethile.
5. Ulawulo lwe-Snap
Le vidiyo iqulethe inkcazo yendlela yokubeka iipropati zokubamba ezithintelayo ukudweba ngokuchanekileyo kwizinto ezibizwa ngokuba yi-snap.
6. Iindlela zokukhetha
Apha ungabona iindlela ezahlukeneyo zokukhetha izinto ngabanye okanye ezininzi.
7. Ukukhethwa ngamacandelo
Le ngcaciso yokukhetha izinto ngokusekelwe kwiimpawu ezifana nombala, uluhlu, uhlobo lwezinto, njl njl.
8. Benzisa i templates
Le vidiyo ifaka ukukhethwa kweetemplates ukwenza ngokwezifiso iiyunithi zomsebenzi, iintlobo zemigca, imithombo, njl.
B. Ukwakhiwa kwezinto
Eli candelo liqulethe imiyalelo eqhelekileyo esetyenziswayo yokudweba nge-AutoCAD.
C. Uyalela ukuba uguqule
Icandelo lesithathu liquka amavidiyo eminye imiyalelo esetyenziswa ukuguqula izinto.
Uhlula kunye nomlinganiselo
D. Uvavanyo lwe-AutoCAD
Kule candelo lesine liqulethwe uchungechunge lwezifundo ezisebenzisa imiyalelo eyahlukeneyo ngaphambili.
Indawo ehambelana nayo
Dweba indlebe ye mouse
Dweba i skullcap
Dweba ikhonkco kwi C
Ukudweba kwe-cap 3D
F. Izifundo eziphambili zevidiyo ze-AutoCAD
Nazi izibalo ezinzima kwi-3D
Eqinileyo ukusuka kwelinye
Solview, ukuthengiswa, i-massprop
Uyifumana njani ihotele nge-50 euros e-Barcelona
Ukunyamekela isitishi esipheleleyo
gerardo zuñiga uthi:
Hayi, iividiyo zakho zokufundisa zinomdla kakhulu kum ukuba unamavidiyo enoba ungayenza njani uphando ngokuphula imigca
Lobu bomi bufuna iinzame, njengokuba wenza umzamo wokuhlawula umsebenzi wakho ekolishi, kukho iindlela zokufunda ukusebenzisa iinkqubo kodwa zifuna umzamo:
-Okunye, ukuba ufundiswa ngokwakho, kukho i-AutoCAD i-videotutori ekhululekile kwi-Intanethi onokuyifunda.
-Nye indlela yokuhlawula ikhosi kunye nomhlobo, olawula iprogram kwaye unokukufundisa i-inshorensi, kodwa ngendlela efanayo kufuneka utyalomle ixesha kwaye ngokuqinisekileyo ufumane ukuhlonishwa kwezomnotho ngeli xesha anika lona.
-Okunye ukuthatha ikhosi kwisixeko sakho.
Nokuba yeyiphi na indlela, ukutyala imali kwimfundo kunomvuzo. Ukufunda ngaphambi kokuphumelela kuluncedo olukhulu xa ufumana umsebenzi; kuba iiklasi ezimbalwa ezinikezelwa eyunivesithi ngokubanzi zisishiya sinolwazi olusisiseko kuphela.
dennis luis vicente uthi:
kuqala enkosi ngokuhoya kwakho; emva koko bacele ukuba bandincede ndifunde i-AUTOCAD ndifunda i-Architecture kwaye andinakho ukubhatala isikhumba, ndingavuya kakhulu ukuba uyandinceda
SALVADOR SOLIS VIDAL uthi:
Ndingathanda ukufunda i-AutoCAD program, ukuhlaziywa
Ndabona i diaz uthi:
Ndifuna ukufunda ukudweba nge-AutoCAD mahhala ukususela ekuqaleni.
ULUIS ALBERTO GUERRERO L uthi:
UKUQHUBANISWA KWEENKQUBO, UMSEBENZI OMKHULU
Ndinomdla omkhulu kwi-autocad (imilo kunye nemidwebo) mbulela
u-victor hugo uhlala uthi:
Ndingumfundi we-autocad, ndifuna ukulanda iividiyo, ndiyabulela kakhulu.
NDIFUNDA UMDINERI NDAKUFUNDA NE-AUTOCAD NDINGABENZA KUNYE UKUBA NGENQAKU
Kubonakala ngathi iphepha liphantsi.
Andikwazi ukuyikhupha iividiyo kwaye andinakufumana ikhonkco ukuba ibhalise kwiforum .. ndiyenza njani?
uFeliks walter olano ulandelele uthi:
Ndingumfundi wobunjineli kwaye ndifuna ukufunda i-autocad izifundo kuba zibalulekile kumsebenzi wam obugcisa kwaye ndiyabulela ngokubelana ngale ndlela ebalulekileyo kunye nam nabafunda nabo.
Igalelo lakho lihle kakhulu, mbulela umhlobo
Kubonakala kukuhle kakhulu, kwaye ndingathanda ukusithumela ividyo yendlela yokuguqula ifayile ye-exel ibe ngumzobo we-autocad
Ukubona iividiyo kufuneka ubhalise kwiphepha elikwikhonkco elithi "Bhalisa apha"
Ndingayilanda njani iividiyo?
Ndifuna ukufunda umsebenzi kwinkampani yokwakha
ndiyabona ndicinga ukuba i-autocad iyinto enhle, ndiyunjineli kwaye ndiyincoma le khasi http://www.ingenet.com.mx
Ndifuna ukuqala i-autocad, ndiyinjini yonjiniyela
oku kuhle kakhulu